Umenzi oLungileyo weSalad Bowl kunye neFektri | Huanna
Ukufumana inqanaba lokufezekisa amaphupha abasebenzi bethu! Ukwakha iqela elonwabileyo, elimanyene ngakumbi kunye nezakhono ngakumbi! Ukufikelela ekuzuzeni macala amathemba ethu, abathengisi, uluntu kunye neziqu zethu ngokuThengisa kakhulu i-32oz Big Soup Cup Packaging PLA Bowl Supplier Large PLA Salad Bowl Banokulahla isiTshayina iPLA Soup Bowl nesiciko, Wamkelekile kwihlabathi liphela abathengi ukuba banxibelelane thina lweshishini kunye nentsebenziswano ixesha elide. Siza kuba liqabane lakho elithembekileyo kunye nomthengisi.
I-China ethengisa kakhulu i-32oz PLA Soup Bowl, i-PLA isaladi yesitya, Izinto zethu zithunyelwa kwilizwe liphela. Abathengi bethu bahlala bonelisekile ngumgangatho wethu onokuthenjwa, iinkonzo ezijolise kubathengi kunye namaxabiso okhuphiswano. Injongo yethu "kukuqhubeka nokufumana ukuthembeka kwakho ngokunikezela iinzame zethu ekuphuculeni rhoqo iimveliso zethu kunye nezisombululo kunye neenkonzo ukuze kuqinisekiswe ukoneliseka kwabasebenzisi bethu, abathengi, abasebenzi, abathengisi kunye noluntu lwehlabathi jikelele esisebenzisanayo ".
Izixhobo ezisebenza kakuhle, iqela lokuthengisa, kunye neenkonzo ezingcono emva kokuthengisa; Sikwintsapho enkulu emanyeneyo, wonke umntu unamathela kwixabiso lenkampani "umanyano, ukuzinikela, ukunyamezelana" kweemveliso ezenzelwe wena i-China PVC Granule Plastic Material noMgangatho oPhezulu, Siqinisekile ukuba siza kubonelela ngezisombululo ezisemgangathweni ophezulu kwixabiso lentengo , Inkxaso emnandi emva kokuthengisa kubathengi. Kwaye siza kuphuhlisa ikamva eliqaqambileyo elibonakalayo.
Egqithileyo Indebe ye-Ice Cream
Okulandelayo: Indebe yeSauce